Alain Ratsimbazafy “Hofanina ireo Ben’ny tanàna TIM”
Maitre Hanitra “Izahay tsy maintsy miteny”
Vao maraina dia efa rakotra mpitandro ny filaminana tao amin’ny Magro Mahajanga ny sabotsy lasa teo.
Nicolas Dupuis “Tsy manana olana amin’i Njiva sy Dax aho”
Nigadona an-tanindrazana ny sabotsy alina teo ny Delegasiona Malagasy nitondra ny BAREA tany Maroc izay niatrika ny lalao ara-pirahalahiana tamin-dry zareo Burkinabe ny 12 oktobra teo,
Antoko DHD “Hay fahefana tsy refesi-mandidy no tanjona ?”
Ny tena nambara dia hoe foanana ny antenimierandoholona fa mandany vola be eto Madagasikara, hoy ny filohan’ny antoko politika DHD, Hary Naivo Rasamoelina, nampahatsiahy ny nambaran’ny filoham-pirenena,
Rivo Rakotovao “Efa ny HCC sy ny primatiora no manao ny asanay ”
Naneho ny heviny manoloana ny valitenin` ny Fitsarana momba ny lalàmpanorenana (HCC) mikasika ny fifidianana loholona ny filohan`ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao.
Fifidianana loholona “Saritsarin-datsa-bato sisa atao”
Naneho ny heviny manoloana ny valitenin` ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) mikasika ny fifidianana loholona sy ireo fitoriana samihafa ny loholona Luc Rabarison.
Fifidianana loholona 14 ireo lisitra kandidà hifaninana
Hanenjika ny maro an` isa ny fitondrana amin` ny fifidianana loholona izay tanterahina ny 11 desambra izao tahaka ny Antenimieram-pirenena. Raha ny isa vonjimaika navokan`ny CENI dia miisa 14 ireo lisitra kandidà hiatrika izany fifidianana izany.
Fetison Rakoto Andrianirina « Fihatsarambelatsihy ny fankalazana ny Repoblika ! »
14 Oktobra, itsingerenan’ny nanambarana ny maha Repoblika an’i Madagasikara. Maro ny fanehoan-kevitra manodidina azy io. Manana ny fahitany azy ny Antoko Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy tarihin’i Fetison Rakoto Andrianirina.
Nahatafiditra Ben’ny tanàna fito ny antoko Tiako I Madagasikara tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna farany teo ho an’ny
distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Hisy ny fiofanana manokana omena azy ireo sy ireo mpanolotsaina TIM miaraka aminy raha araka ny fanazavan’ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy omaly tamin’ny mpanao gazety. Izany no hatao, hoy izy dia hahafahana manatanteraka ilay vanim-pampandrosoana katsahina isaky ny kaominina mba hisy fiantraikany ho amin’ny isam-baravarana izany. Nanamafy ity solombavambahoaka iray ity fa depioten’ny Ben’ny tanàna rehetra izy noho izany misokatra ary vonona hiara-kiasa amin’ny rehetra hahafahana mampandroso an’Atsimondrano. Mikasika ny fizotry ny fifidianana Ben’ny tanàna farany teo dia nomarihiny manokana fa tsy nilaozan’olana tany amin’ireo biraom-pifidianana sasany saingy mpanaja ny lalàna velona ny antoko Tiako I Madagasikara ka manaja izay didy navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady hatao amin’ny fanjakana ihany koa.